Inona avy ireo voka-dratsin'ny doxycycline mahazatra? - BALLYA
Posted on Aprily 6, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe doxycycline?
Vokatry ny doxycycline
Ahoana ny fomba hisorohana ny voka-dratsin'ny doxycycline?
Fampandrosoana doxycycline amin'ny ho avy
Doxycycline dia karazana tetracyclines, izay afaka mitsabo ny aretin'ny Mycoplasma chlamydia. Vovoka kristaly mavo na mavo hatsatra izy io, maimbo ary mangidy. Mora levona ao anaty rano sy methanol izy io, mora esorina amin'ny etanol sy acétone ary tsy mety levona amin'ny chloroform.
Doxycycline dia karazana antibiotika manokana izay afaka mamono mikraoba bitika isan-karazany izay sarotra vonoin'ny antibiotika hafa, ao anatin'izany ny bakteria sy ny katsentsitra. Ny parasites dia afaka manjanaka ny sela ho lasa zavamananaina intracellular mandritra ny fotoana maharitra, noho izany dia sarotra ny mamono antibiotika maro. SAINGY voka-dratsin'ny doxycycline Tsy zavatra tokony tsy raharahantsika.
Tsy toy ny karazana antibiotika hafa, doxycycline dia afaka miditra ao anaty sela ary miditra anaty sela, izay ahafahan'ny antibiotika mamono otrikaretina. Karazan-javamananaina intracellular isan-karazany izay mora tohina amin'ny doxycycline dia misy pathogens maro izay miteraka aretina zoonotic, chlamydia, legionella, ary plasmodium. Ny zavamiaina bitika mora tohina dia misy spirochetes sy bakteria miteraka mony, Bacillus antracis, ary Vibrio cholerae.
Ny fihanaky ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny tetracycline ary oxytetracycline, ary ny herin'ny bakteria amin'ny vivo sy in vitro dia mahery noho ny tetracycline. Ny mikraoba dia manana fanoherana akaiky ny doxycycline, tetracycline ary oxytetracycline.
Ampiasaina indrindra ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony, ny tonsillitis, ny aretin-koditra biliary, ny lymphadenitis, ny cellulitis, ny bronchitis mitaiza, sns. Ampiasaina koa izy io hitsaboana typhus, Tsutsugamushi, mycoplasma pnemonia, sns. Mbola azo ampiasaina amin'ny fitsaboana kolera, ary hisorohana ny tazomoka falciparum sy ny aretina Leptospira.
Doxycycline hydrochloride dia matetika ampiasaina, izay mavo mavo na mavo vovoka kristaly; maimbo sy mangidy. Mora levona ao anaty rano sy methanol izy io, mora esorina amin'ny etanol sy acétone ary tsy mety levona amin'ny chloroform. Ny fanafody syntetika sasany misy doxycycline dia mora tohina sarotra amin'ny ion-by ao anaty rano, mamorona vahaolana mena ary mampihena ny fahombiazany.
4. Mekanisma an'ny Action
Doxycycline dia mety hanelingelina ny fahafahan'ny zavamiaina bitika bitika hamokatra proteinina. Ny proteinina no singa fototra iorenan'ny fiainana. Ny famokarana proteinina ao anaty sela dia matetika atao amin'ny ribosome, ary ilaina izany fomba izany mba hahaveloman'ny zavamiaina rehetra. Mamono bakteria sy katsentsitra ny doxycycline, fa tsy misy fiantraikany amin'ny selantsika. Ny antony dia satria ny vatan'olombelona dia manana rafitra ribosomal hafa tanteraka amin'ny an'ny zavamiaina tsotra.
Ampiasaina amin'ny fitsaboana ny otrikaretina taovam-pisefoana, urinary ary biliary vokatry ny bakteria mora tohina. Ny spectrum antibacterial dia mitovy amin'ny tetracycline sy oxytetracycline, ary ny herin'ny bakteria dia matanjaka kokoa noho ny tetracycline. Ny mikraoba dia manana fanoherana akaiky ny doxycycline, tetracycline ary oxytetracycline. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana typhus, Qiang trypanosomiasis, mycoplasma pneumonia, sns.
Amin'ny fampiharana fitsaboana maharitra, dia hita fa fanafody dozaklikia tsara ny doxycycline. Izy io dia antibiotika tetracycline semi-synthetic efa ela niasa sy be mpiorina namboarina avy oxytetracycline. Ny antony mahatonga ny doxycycline ampiasaina hitsaboana bronchitis mitaiza dia:
Spektrum lehibe momba ny bakteria sy ny vokatry ny bakteria mahery. Ankoatra ny fiatraikany amin'ny bakteria Gram-positive sy ny ratsy dia mety manakana ny Rickettsia, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Amoeba, sns. indrindra ireo bakteria mahazatra ao amin'ny lalan-pisefoana misy ireo marary voan'ny bronchitis mitaiza dia tena mora tohina amin'ny doxycycline.
Ny vokany dia azo tehirizina mandritra ny fotoana lava, ary ny fandraisana azy dia haingana aorian'ny fitantanana am-bava. Ny vokany farany azo atao aorian'ny adiny 3. Ny voa dia mazàna mamoaka tsimoramora. Ny olon-dehibe dia mihinana 200 mg indray mandeha am-bava, ary mamoaka 32% ao anatin'ny 24 ora ary 41% ao anatin'ny 48 ora. Ny fifantohana zava-mahadomelina dia lava kokoa noho ny tetracycline sy oxytetracycline, izay mety kokoa amin'ny fitsaboana ny fivontosana maharitra. Ny fatra am-bava dia 0.2 grama amin'ny andro voalohany, ary avy eo indray mandeha isan'andro, 0.1 grama (100 mg) isaky ny mandeha.
Satria ny doxycycline dia afaka mamono bakteria maromaro izay misy fiatraikany amin'ny rafi-pisefoana ao amin'ny vatana, matetika izy io dia entina hitsaboana pnemonia sy bronchitis. Mandritra izany fotoana izany, io antibiotika io dia be mpampiasa koa amin'ny fitsaboana ny mony doxycycline sy ny aretina urogenital. Ny doxycycline dia matetika omena ho kapsily na takelaka am-bava, fa indraindray kosa dia omena amin'ny tsindrona intravenous. Rehefa avy nihinana doxycycline dia hisy vokany maharitra mandritra ny fotoana fohy, izay midika fa ny fanafody dia azo ampiasaina tsy fitsaboana fotsiny, fa koa fitsaboana fisorohana ny aretin'ny vatana.
Amin'izao fotoana izao, doxycycline dia ampiasain'ny mpizahatany na ny miaramila any amin'ny firenena tropikaly hisorohana aretina sasany, toy ny fiarovana ny olona amin'ny tsimokaretina tazomoka malaria. Doxycycline dia afaka manome fiarovana ihany koa amin'ny bakteria mahazatra izay miteraka fivalanana. Mba hisorohana tsara ny aretina, rehefa tandindomin-doza ny marary dia mila mihinana zava-mahadomelina isan'andro izy ireo.
Doxycycline dia afaka manohitra mavitrika ny lisitry ny bakteria pathogenika ampiasaina amin'ny ady amin'ny bakteria, ao anatin'izany ny Bacillus antracis. Ka ity zava-mahadomelina ity dia azo ampiasaina ho fomba fisorohana mahomby hiarovana ny olona amin'ny loza mety hitranga amin'ny ady amin'ny bakteria na ny loza ateraky ny mpampihorohoro mamoaka bacillus antracis.
3. Fampiasana veterinary
Aretina bakteria: matetika ao amin'ny lalan-pisefoana, toy ny pleuropneumonia, pnemonia amin'ny kisoa ary aretina hafa. Doxycycline + florfenicol + mahomby ny fanafody fanoherana tazo;
Actinomycetes: pustules afaka maniry amin'ny toerana maro amin'ny kisoa. Ankoatry ny Streptococcus pyogenes, ny actinomycetes dia mety miteraka io aretina io ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ny doxycycline dia mandaitra kokoa.
aretina "vatana": Mycoplasma dia aretina asthmatic, doxycycline + florfenicol (mycoplasma) dia mandaitra;
Chlamydia: Mety ho vokatry ny famafazana zaza izany ary ny endrika perla an'ny placenta dia tokony hojerena, ary ho tsara ny doxycycline; Na mety ho vokatry ny conjunctivitis, ny tetracycline eye drop dia tsara kokoa;
Ny spirochetes (fivontosan'ny kisoa sns.) Sy Rickettsia dia tsy dia ampiasaina loatra, ka tsy hiteny bebe kokoa aho;
Ao amin'ny protozoa-dra, izay antsointsika matetika hoe eperythria sy aretina hafa, dia mety ny fitantanana doxycycline;
Ny Oxytetracycline dia matetika ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny famafazana, miaraka amin'ny fahasimbana kely kokoa ary ny vokatra manalefaka kokoa; doxycycline dia matetika ampiasaina amin'ny zana-kisoa mampinono teraka fito andro.
Ny fampandrosoana ny doxycycline dia mifototra amin'ny fahitan'ny mpahay siansa ny penisilinina, izay fitambarana voajanahary avy amin'ny bobongolo manokana. Orinasa fivarotam-panafody maro no nanomboka nanadihady ny mekanisma sy ny fananan'ny fitambarana voajanahary maro hamonoana zavamiaina bitika, toy ireo novokarin'ny zavamiaina bitika sy zavamaniry hafa. Ity fizotrany ity dia antsoina hoe bio-Discover. Ireo fitambarana voajanahary ireo dia afaka mitondra hetsika misy bakteria sasany, ary ireo fitambarana voaova syntetika taty aoriana dia afaka manatsara ireo fitambarana voajanahary ankehitriny.
Toy ny antibiotika maro, doxycycline dia mora tohina amin'ny bakteria tsy mahazaka antibiotika, ary misy porofo manamarina fa io fahasamihafana io dia nanomboka niseho tamin'ny aretina maro izay be mpampiasa doxycycline, toy ny fitsaboana ny mony. Midika izany fa tokony hampihena ny fampiasana doxycycline na amin'ny tranga sasany hosoloina fanafody hafa. Mazava ho azy fa mila manao fikarohana lalina sy fikarohana lalina kokoa ny mpahay siansa amin'ny dingana manaraka mba hahitana safidy vaovao hafa.
Ny fanehoan-kevitry ny gastrointestinal dia mahazatra (20% eo ho eo), toy ny maloiloy, mandoa, mivalana, sns, izay azo alaina amin'ny fihinanana fanafody aorian'ny sakafo.
Amin'ireo marary manana tsy fahampian'ny aty sy ny voa, ny antsasaky ny fatr'io fanafody io dia tsy dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny marary mahazatra, saingy tokony hampiasaina am-pitandremana ireo marary manana tsy fetean'ny aty sy ny voa mafy.
Ny areti-mifindra roa (aorian'ny fampiasana antibiotika an-kalamanjana lava dia voarara ny fitomboan'ny sorisory mora tohina ary mitombo isa marobe, ka miteraka areti-mifindra vaovao. Izany dia antsoina hoe aretina roa.)
Misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny nify sy taolana: indrindra ho an'ny zaza am-bohoka sy ny zaza. Ny antibiotika Tetracycline dia afaka mametraka ao amin'ny taolana sy nifin'ny embryon sy ny zaza kely, ary mitambatra amin'ny kalsioma, izay mety hiteraka mavo ny enamel nify (fantatra amin'ny anarana hoe nify tetracycline) Ary hypoplasia.
Pseudotumor an'ny ati-doha;
Fanehoan-kevitra momba ny allergie. Amin'ny ankapobeny dia tokony ho contraindicated ho an'ny zaza latsaky ny 8 taona, ny vehivavy bevohoka sy ny vehivavy mampinono.
Ny voka-dratsin'ny doxycycline izay be mpilaza matetika dia ny fivontosan'ny esophageal na ny heartster, izay matetika no tena tsy mahafinaritra amin'ny marary, fa ny marary kosa dia afaka misoroka tsara ny effets effets vokadratsin'ny doxycycline amin'ny fisotro rano be dia be. Ny roapolo isan-jaton'ny olona mihinana zava-mahadomelina matetika dia misy fiatraikany amin'ny tsy fahampian'ny photosensitivity, izay tena matotra indrindra ho an'ireo mpandeha izay mampiasa fanafody amin'ny fisorohana ny tazomoka any amin'ny tany mafana.
Ny doxycycline dia tsy tokony ampiasaina amin'ny zaza sy ny vehivavy bevohoka, hiteraka fandokoana maharitra amin'ny nifin'ny mpampiasa izany, ary hisy vokany ratsy hafa amin'ny fitomboan'ny taolana ao am-bohoka. Doxycycline koa dia afaka mampitombo ny poizin'ny fanafody anti-inflammatoire-methotrexate.
3. Ahoana ny fomba hisorohana ny voka-dratsin'ny doxycycline?
Alao antoka fa ampahafantaro ny dokoteranao ny fanafody sy ny vokatra ara-pahasalamana rehetra raisinao. Ny fampifangaroana zava-mahadomelina sasany amin'ny doxycycline dia hampitombo ny voka-dratsiny. Ohatra, ibuprofen hampitombo ny fahatsapana ny hoditra amin'ny masoandro. Raha mihinana ireo zava-mahadomelina roa ireo miaraka amin'izay ianao dia mety ho may amin'ny sun.
Raiso doxycycline aorian'ny sakafo na sakafo. Izany dia afaka mampihena ny fiatraikany ratsy toy ny maloiloy sy ny maloiloy.
Tokony handry adiny iray farafahakeliny aorian'ny fisotroanao fanafody ianao, ary tokony hisotro rano bebe kokoa araka ny torolalan'ny dokoteranao. Ireo fomba rehetra ireo dia manampy amin'ny fisorohana ireo voka-dratsy lehibe toy ny fahasosorana amin'ny esofagaly sy ny fery. Ny fery mahery dia mila jerena mba hanakanana ny mety hisian'ny homamiadana esofagaly.
Raha tsy manoro hevitra anao ny dokotera fa tokony hanao izany ianao dia tokony hisoroka ny fihinanana doxycycline miaraka amin'ny fanafody hafa manaitaitra ny vavony.
Sorohy ny fiposahan'ny masoandro maharitra. Raha tena mila mivoaka ianao dia tokony handray fepetra fiarovana mifanaraka amin'izany.
Ny fihinanana sakafo na vokatra ara-pahasalamana toy ny yaourt misy bakteria asidra laktika dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny aretina masirasira.
Vao tsy ela akory izay, rehefa niady hevitra ny mpahay siansa ny voka-dratsin'ny fanafody anti-malaria Mefloquine nampiasaina tamin'ny hery fiarovana sy ny mpitsoa-ponenana, nantitranteriny ny anjara andraikitra lehibe asehon'ny doxycycline amin'ny fanoloana ny zava-mahadomelina Mefloquine. Mazava ho azy, inoana ankehitriny fa ny mefloquine dia tokony ho fanafody mahomby kokoa hisorohana ny tazomoka, fa ny mahaliana kokoa, ny valin'ny fandinihana teo aloha dia naneho fa maro ny olona no tena tia mefloquine toy izay doxycycline. Mety hitaratra ny voka-dratsin'ny doxycycline izany, ary satria mila atao isan'andro ny doxycycline dia hitondra fahasahiranana be ho an'ny marary izany.
Ny fandinihana natao tato ho ato dia nahatsikaritra fa ny doxycycline dia mety hisy fiatraikany amin'ny fizotran'ny sela manokana ao amin'ny selan'ny olombelona, ​​indrindra ny kilasin'ny anzima izay tena manandanja tokoa amin'ny valin'ny fivontosan'ny vatana. Ity endri-javatra ity dia mety hahasoa tokoa, ary afaka manampy ny mpikaroka hanana fitsaboana amin'ny aretina maro, fitsaboana vaovao ho an'ny areti-mifindra, ao anatin'izany ny homamiadana (indrindra ny homamiadana mifandraika amin'ny taolana), ny aretina autoimmune (ao anatin'izany ny aretin'ny rheumatoid sy ny sclerose maro), ny aretina atherosclerotic (takelaka miteraka aretim-po). Na izany aza, ny fampiharana ireo fitsaboana vaovao ireo dia eo amin'ny dingana andrana ihany. Nilaza ny mpikaroka fa hanohy hikaroka.
Doxycycline dia antibiotika tetracycline izay miasa tsara amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana ary azo entina any amin'ny firenena tropikaly koa ho fepetra fisorohana hisorohana aretina sasany manelingelina. Vokatry ny doxycycline misy tokoa, saingy mbola misy lanjany lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Mampanantena ny hoavin'ny doxycycline.
BALLYA manome a ballya-tetracyclines-test hilaza aminao raha misy tetracyclines residu amin'ny tantely, akoho ary henan-kisoa.
Zava-mahadomelina: Vokatry ny Doxycycline
Mayoclinic: Doxycycline (Làlana am-bava)